မိဘနှစ်ပါးကို အရင်လိုမောင်နှမစုံစုံလင်လင်ကန်တော့ခွင့် မရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မ – Cele Oscar
သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှား မှုတွေမှာ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ တစ်သား တည်း ပါဝင် ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်။ လူငယ် ပီပီ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့ စိတ်ထား ကို တော့ ပရိသတ်တွေက လေးစား ဂုဏ်ယူ နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့်တရားစွဲ ဆိုပြီး နောက်ရက်မှာဘဲ နေအိမ် တွင် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံ ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ် တွေ နဲ့ အနုပညာ ရှင် ညီအစ်ကို မောင်နှမ များက ပိုင်တံခွန် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ရန် သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် များတွင် Speak Out လုပ်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိခင်ကလည်း သားဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက် စိုးရိမ် ပူ ပန်နေတာပါ။ မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက် ကလည်း ပိုင်တံခွန် ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် အရင်လို မောင်နှမစုံစုံ လင်လင်နဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို မကန်တော့ရတဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်း မိကြောင်း ရင်ဖွင့် ပြောပြ လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမကလည်း ” မနေ့က အမေ့အိမ်ကို သွားတော့ ပိန်သွားတဲ့ အမေ့ကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရတယ်။ အရင်လို မောင်နှမ စုံစုံလင်လင် နဲ့ အမေ နဲ့ အဖေ့ကို မကန်တော့ ရ တော့ ဝမ်းနည်းချက်က ပြောမပြ တတ်ဘူး။ပိုင်…နင့်ကို အရမ်း သတိရတာပဲ။ အဆင်ရော ပြေရဲ့လား? နင်ရှိရင် ပျော်ရမှာ။ အိမ်ကလည်း ဆူညံနေမှာ။ အခုတော့ တိတ် ဆိတ်ပြီး ပူပင်သောက မျက်နှာတွေ နဲ့။ တို့အမေလည်း နေမကောင်း ဘူးဟ။ကိုယ့်မောင် ကို စိတ်ပူတာ က တစ်မျိုး၊ အမေ့ကို စိတ်ပူရတာက တစ်မျိုး နဲ့ အိပ်မရတဲ့ ရက်တွေလည်း များခဲ့ပြီ။ စိတ်ရှုပ်စရာ တွေ များလွန်းလို့ ကိုယ်ပါ မလဲ ကျသွားဖို့ အားတင်း ထားရတယ်။ ဒီကာလဆိုး ကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါရစေတော့ဗျာ😔” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစွာ နဲ့ ရေး သား ထားတာပါ။
သရုပျဆောငျ ပိုငျတံခှနျ ကတော့ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထု လှုပျရှား မှုတှမှော ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ တဈသား တညျး ပါဝငျ ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦး ဖွဈပါ တယျ။ လူငယျ ပီပီ ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ ပူးပေါငျး ပါဝငျခဲ့တဲ့ ပိုငျတံခှနျ ရဲ့ စိတျထား ကို တော့ ပရိသတျတှကေ လေးစား ဂုဏျယူ နကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ကိုတော့ ပုဒျမ ၅၀၅ (က) ဖွငျ့တရားစှဲ ဆိုပွီး နောကျရကျမှာဘဲ နအေိမျ တှငျ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးခံ ခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျ တှေ နဲ့ အနုပညာ ရှငျ ညီအဈကို မောငျနှမ မြားက ပိုငျတံခှနျ အမွနျဆုံး လှတျမွောကျ ရနျ သူတို့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျ မြားတှငျ Speak Out လုပျပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ မိခငျကလညျး သားဖွဈသူရဲ့ ကနျြးမာရေး အတှကျ စိုးရိမျ ပူ ပနျနတောပါ။ မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျ ကလညျး ပိုငျတံခှနျ ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ အရငျလို မောငျနှမစုံစုံ လငျလငျနဲ့ မိဘနှဈပါးကို မကနျတော့ရတဲ့ အတှကျ ဝမျးနညျး မိကွောငျး ရငျဖှငျ့ ပွောပွ လာတာ ဖွဈပါတယျ။
သူမကလညျး ” မနကေ့ အမအေိ့မျကို သှားတော့ ပိနျသှားတဲ့ အမကေို့ ကွညျ့ပွီး စိတျမကောငျး ဖွဈရတယျ။ အရငျလို မောငျနှမ စုံစုံလငျလငျ နဲ့ အမေ နဲ့ အဖကေို့ မကနျတော့ ရ တော့ ဝမျးနညျးခကျြက ပွောမပွ တတျဘူး။ပိုငျ…နငျ့ကို အရမျး သတိရတာပဲ။ အဆငျရော ပွရေဲ့လား? နငျရှိရငျ ပြျောရမှာ။ အိမျကလညျး ဆူညံနမှော။ အခုတော့ တိတျ ဆိတျပွီး ပူပငျသောက မကျြနှာတှေ နဲ့။ တို့အမလေညျး နမေကောငျး ဘူးဟ။ကိုယျ့မောငျ ကို စိတျပူတာ က တဈမြိုး၊ အမကေို့ စိတျပူရတာက တဈမြိုး နဲ့ အိပျမရတဲ့ ရကျတှလေညျး မြားခဲ့ပွီ။ စိတျရှုပျစရာ တှေ မြားလှနျးလို့ ကိုယျပါ မလဲ ကသြှားဖို့ အားတငျး ထားရတယျ။ ဒီကာလဆိုး ကနေ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျပါရစတေော့ဗြာ😔” ဆိုပွီး ဝမျးနညျးစှာ နဲ့ ရေး သား ထားတာပါ။